Esi tinye ọnọdụ na foto | Akụkọ akụrụngwa
Smartphones emeriwo agha ahụ site na mbufe nke igwefoto igwefoto ọdịnala, mana ọ bụghị kpọmkwem n'ihi ogo ha, ogo nke na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọkachasị na njedebe dị elu, enweghị obere ma ọ bụ ihe ọ bụla na-enwere anyaụfụ nke ụdị igwefoto a ... Isi ihe kpatara ya bụ nkasi obi.
Anyị na-eji ekwentị anyị mgbe niile, mgbe niile. Na ya, anyị na-ebu igwefoto maka foto na vidiyo (camcorders bụ ngwaahịa ndị ọzọ na mbata nke smartphones hụrụ ahịa ya daa). Na ama anyị, anyị enweghị ike ịse foto na vidiyo ebe ọ bụla anyị nọ, mana ọ na-enye anyị ohere chekwaa ebe site na otu.
Mgbe anyị na-ese foto, yana faịlụ anyị mepụtara, a na-echekwa usoro data, a na-akpọ EXIF, nke na-echekwa ọ bụghị naanị ikpughe, mkpuchi na ụkpụrụ ndị ọzọ, kamakwa, ọ bụrụ na anyị ahaziri igwefoto anyị ka ọ bụrụ ndekọ ọnọdụ data, na-echekwa ha.
1 Kedu ihe anyị nwere ike iji data ahụ mee?
2 Tinye ebe a na foto na Mac
3 Tinye ebe foto na Windows
4 Tinye foto ọnọdụ na iPhone
5 Tinye ebe foto di na Android
Kedụ ihe anyị ga - eji eYou bụ data?
N'ihi data ọnọdụ, ma dabere na njikwa foto anyị na-eji, anyị nwere ike ngwa ngwa na mfe ịchọta ebe anyị sere foto, na-enweghị ike ịgbanwe ntụgharị ndị echekwara n'otu ebe.
Ka afọ na-aga, igwe foto dị mma, ma nke na-enyo enyo ma enweghị enyo, nọ na-agbakwunye ọrụ a, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ bụ ngwa dị iche iche anyị ga - azụrịrị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa foto anyị n'akụkụ otu ebe.
Ọ bụrụ n ’ị chere na oge eruola ịmalite ịkọwapụta foto gị site na ọnọdụ, ọkachasị ọ bụrụ n’ịchọrọ njem, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị otu ị ga tinye ebe foto nke na-enweghị ya, n'ihi na e jighị ya na ngwaọrụ na-enye ọrụ a.
Tinye ebe a na foto na Mac
Iji jikwaa onyonyo anyị na Mac, ọ bụrụ na anyị ejikwa iPhone, ngwa kachasị mma anyị nwere bụ Fotos, ngwa nke di na obodo na macOS. Ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye ebe foto dị na Mac, anyị ga-emerịrị usoro ndị a.
Nke mbụ, anyị ga-emeghe ngwa Photos na họrọ oyiyi nke anyị chọrọ ịgbakwunye ozi a.
Ozugbo anyị ahọpụtara onyonyo ahụ, anyị ga-agarịrị n’elu menu ngwa ahụ wee pịa (i) gaa nweta ihe oyiyi oyiyi. Akụkụ a na-egosi data EXIF ​​nke ihe oyiyi ahụ, nke gụnyere ọnọdụ ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị.
Na ọkpọ Kenye ọnọdụ anyị ga-ede ebe e mere ya, na nke a ọ bụ Novelda. Na akpaghị aka, ka anyị na-ede, a ga-egosi nhọrọ dị iche iche nke anyị nwere ike ịhọrọ.
N'otu oge, anyị achọtala aha ebe ahụ, anyị kwesịrị kụrụ banye. Ọzọ, a ga-egosipụta aha obodo anyị họọrọ tinyere map ebe ọ nọ.
Iji lelee na ngwa ahụ amatala ebe ọhụrụ anyị gbakwunyere na onyonyo, naanị anyị ga-eji nhọrọ ahụ Ọbá akwụkwọ foto> Ebe ma chọta onyinyo ahụ n’ebe anyị dọbara ya.
Tinye ebe foto na Windows
Na nwute, na n'adịghị ka macOS, Windows 10 anaghị enye anyị ụzọ ọ bụla iji tinye ọnọdụ na foto anyị, nke na-amanye anyị ịbanye na ngwa ndị ọzọ. A na-akpọ ngwa na-enye nsonaazụ kacha mma GeoPhoto - Geotag, Maapụ & Ihe ngosi mmịfe. GeoPhoto bụ ngwa anyị nwere ike ibudata n'efu, yana nke anyị nwere ike ịgbakwunye ebe ahụ na foto atọ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga n'ihu na-eji ya ịgbakwunye ọnọdụ na foto ndị ọzọ, na mgbakwunye na iji uru nke ọrụ ndị ọzọ ọ na-enye anyị (chọta ihe oyiyi na maapụ dabere na ọnọdụ ha), anyị ga- gaa na ndenye ọpụpụ ma kwụọ ụgwọ euro 5,99 ọ na-efu. Ugbu a anyị doro anya na nke ngwa, anyị nwere ike itinye ọnọdụ na foto anyị na Windows 10, anyị na-egosi gị usoro ị ga - eso.
Ozugbo anyị wụnye ngwa ahụ na Storelọ Ahịa Windows, anyị na-ahọrọ onyonyo ma ọ bụ onyonyo ịchọrọ ịgbakwunye ọnọdụ ahụ, pịae bọtịnụ aka nri wee mepee ha na GeoPhoto.
Ọzọ, anyị ga- tinye oyiyi ọnọdụ na anyị ahọpụtara n'ime igbe dị elu wee họrọ site na nhọrọ ndị ọ na-enye anyị, nke bụ nke kwekọrọ na ọnọdụ ahụ. N'ikpeazụ, anyị ga-echekwa ọnọdụ dị na oyiyi ahụ, site na bọtịnụ nchekwa dị na ala aka nri nke ihe oyiyi ahụ.
Iji lelee na echekwara ebe ahụ n'ụzọ ziri ezi, naanị anyị ga-emepe ngwa ahụ na onyogho anyị jiribu cchoo otu esi egosi nke a na eserese, na-eji ọnọdụ anyị gbakwunyere.
Budata GeoPhoto na Storelọ Ahịa Windows
Tinye foto ọnọdụ na iPhone
N'ime Storelọ Ahịa Ngwa anyị nwere ngwa dị iche iche na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ na data EXIF ​​nke foto anyị ọbụghị ha niile na-ekwe ka anyị tinye ebe ka foto site na ngwaọrụ.
Otu n'ime nhọrọ kachasị mma dị na Storelọ Ahịa App nke na-enye anyị ọrụ a bụ Gbanyụọ EXIF, ngwa nke nwere ọnụahịa nke 3,49 euro, mana anyị nwekwara ike ịchọta nsụgharị Lite nwere ọnụọgụ ole na ole iji nwee ike ịnwale ọrụ niile ọ na-enye anyị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye ọnọdụ na foto ozugbo site na iPhone nwere Ngosi EXIF, anyị ga-emerịrị ya usoro ozo:
Ozugbo anyị meghere ngwa ahụ, anyị ga-emerịrị họrọ oyiyi nke anyị chọrọ ịgbakwunye ọnọdụ ahụ.
Ọzọ, anyị na-aga na menu ala nke ihe oyiyi ahụ wee pịa Dezie EXIF.
Na windo na-esote, anyị na-aga ala, n'ime Ebe, pịa na magnifying iko ka tinye aha obodo ebe ọ dị, anyị na-etinye mgbanwe na ọ bụ ya.
Tinye ebe foto di na Android
Na Play anyị nwere ngwa ngwa Photo EXIF ​​Editor, ngwa nke, dị ka aha ya na-egosi, na-enye anyị ohere dezie data EXIF ​​nke foto, ma ọ bụ iji tinye data ọhụrụ ma ọ bụ hichapụ ndị dị ugbu a. Iji tinye ọnọdụ na foto na gam akporo na Photo EXIF ​​Editor anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Nke mbụ, ozugbo anyị mepere ngwa ahụ, anyị ga-pịa .Nyocha wee chọta foto anyị chọrọ itinye data EXIF.
Ọzọ, nchịkọta akụkọ ga-emepe ebe anyị nwere ike ịgbanwe data niile anyị chọrọ. N'okwu anyị, anyị pịa Geolocation.
Na-esote, a ga-egosi maapụ ebe anyị ga-egosipụta ebe ruru ebe foto a dị. Ozugbo ntụtụ ahụ na ọnọdụ ya dị, pịa na nkwado akara ngosi wee chekwaa site na akara ngosi egosiri n'otu ọnọdụ ahụ.
Ozugbo anyị chebere onyonyo ahụ na ọnọdụ ya, a ga-egosipụta data EXIF ​​nke foto ahụ ọzọ na ọnọdụ anyị họọrọ.
Onye editọ foto exif
Foto dị na Exif Editor Pro
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Foto » Na-agbakwunye ọnọdụ na foto